Kuhlomule abafundi baseMlazi ngeminikelo | News24
Kuhlomule abafundi baseMlazi ngeminikelo
Durban - Kuhlomule odado baseMlazi ngomnikelo wezinkampani ezinkulu ezintathu.
Izungu Investments company (Zico), i-SAFLOG-SAFreight Logistics(Pty) LTD kanye neeSpihiwe Tshabalala Foundation zinikele ngezicathulo zesikole kubafundi baseMafukuzela Primary.
Lezi zinkampani zimeme nowe-Vuma FM ukuba abe yingxenye yalo mcimbi lapho bekukhuthazwa nabafundi ngokubaluleka kwemfundo.
UPhumlani Dube owaziwa ngo-Big Pun emsakazweni weluleke abafundi ngokuthi: "Imfundo ibalulekile ngoba yiyo engaguqula isimo sempilo yakho iqhakazise nekusasa lakho."
OLUNYE UDABA:IZITHOMBE: Izinkampani zinikela ngezicathulo esikoleni
USiphiwe Tshabalala naye obekayingxenye yalo mcimbi uthe, "wonke umuntu engalidlala ibhola kodwa kubalulekile ukuqala ngemfundo ugcine ngalo ibhola, uma ufunda wonke amaphupho akho ayafezeka, ibhola alihambi lodwa lihambisana nemfundo."
Abanye abahambele lo mcimbi uMama uPhindi Gwala noYolanda Gwala be-SAFLOG, uSandile Zungu we-ZICO Investments company noqhamuka emnyangweni wezemfundo uMama uShamase nabanye abamele ibhodi elengamele lesi sikole.